Sidee aad kala bixi karto Isladooda Videos u Free
> Resource > Download > Sida loo Download Isladooda Online iyo Free
Isladooda, ayaa had iyo jeer hit ah labaatankii sano ee ma aha oo kaliya in Japan laakiin sidoo kale dalalka kale ee adduunka oo dhan. Isladooda, ayaa sidoo kale lagu magac daray doonaa ama Sabtaytal oo ku qoran luqado kala duwan si ay u la fahamsan yahay dadka ka yimid dalalka kale. Anigu garan maayo waxaad ku saabsan, laakiin aniga qudhaydu, waan sii socda qaar ka mid ah taxanaha Isladooda, sida Naruto ee internet-ka. Oo waxaa dhawaan, Waxaan ka fikirayaa degsado videos Isladooda, si aan mar walba iyo meel walba oo iyaga ka daawan kartaa. Ka dib markii qaar ka mid ah baadhi iyo doorashada si taxaddar leh, Waxaan ka helay barnaamij aad u weyn si ay u caawiyaan. The Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) waa waxa aan ka hadlayaa. Waxaa soo bixi kartaa videos Isladooda kaliya click ah. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay u bedeli karaan videos in ay qaabab kasta si ay u noqon la jaan qaadi karo hindisooyin badan.
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer oo aan bilowno dib markii la rakibey. Markaasuu i raac si aad u hubiso ka soo tutorial ah oo faahfaahsan hoos ka.
1 Raadi Isladooda aad jeceshahay in aad kala soo bixi
Waxaa jira goobo badan oo Isladooda, in laguu ogolaado in aad si qulquli Isladooda online oo lacag la'aan ah. Raadi aad jeceshahay videos Isladooda, oo iyaga guji inuu u ciyaaro. By jidkii, waxaan curated liiska ugu sareeya ee goobaha Isladooda, in aad u qalmaan isku day. Riix halkan si aad iska baarto.
2 Download Isladooda, laba siyaabood
Marka video la ciyaaro, waxaad ka heli doontaa ah Download button Midigta sare ee shaashadda video ah. Riix badhanka si ay u bilaabaan habka dajinta.
Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa url ee video iyo riix URL paste button on furmo suuqa hoose. Markaas barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi videos ah.
Fiiro gaar ah: Waxaad ku dari kartaa dad badan oo videos in safka dajinta iyo barnaamijkan soo bixi kartaa 5-10 videos waqti isku mid ah.
3 Beddelaan inay qaabab kale (optional)
Ka dib markii videos waxaa lagala soo bixi, tag bixi maktabadda si aad uga hesho. Ogsoonow badalo button Midigta? Waxaa Riix dooro qaab uu furmo suuqa Output Qaabka in arbushin ilaa doona. Ugu dambeyntii riix OK si ay u bilaabaan soo celiyaa.
Fiiro gaar ah: Waxaad xaq u riixi kartaa video ah oo ay doortaan Open ee Folder in ay helaan videos ee fayl deegaanka.
Weli yaabeen in barnaamijkan ma shaqeynayaa? Waa in aad joojiso oo kala soo bixi mid u leedahay in isku day ah. Ugu yaraan, downloader waxa asiibay waa ii shaqeysaa. Bal aynu eegno sida ay u shaqayn doona adiga.